Ring Sizes paIndaneti karukureta
Ring hukuru paIndaneti Calculator
Ring Sizes paIndaneti karukureta Akakubvumidza kuwana uye exchange mhete hukuru kune American, British, Russian, Japanese hukuru, dhayamita mune millimeters uye masendimita, kana chigunwe sekamufarenzi.
Ring hukuru paIndaneti Calculator Akakubvumidza kuwana uye exchange mhete hukuru kune American, British, Russian, Japanese hukuru, dhayamita mune masendimita uye masendimita, kana chigunwe sekamufarenzi. Somuenzaniso, exchange rin'i hukuru kubva American kusvikira Russian, kana kubva dhayamita kuti munwe sekamufarenzi. Uyewo unogona kuona mhete hukuru chati, pamwe huru neduku hukuru.
Dhayamita (masendimita) Dhayamita (millimeters) Finger sekamufarenzi ChiRussian Chirungu (UK) American (USA) ChiJapanese
0.553 0.569 0.585 0.601 0.618 0.634 0.65 0.666 0.699 0.716 0.732 0.748 0.764 0.781 0.798 0.814 0.846 0.862
Zvishongo hukuru paIndaneti Calculator
Change zvamaoko hukuru kune hukuru Russian uye ruoko sekamufarenzi mune masendimita kana masendimita.
Gold paaunzi kuti magiramu paIndaneti Calculator
Change goridhe uremu kubva Troy Ounces kuti magiramu uye kubva magiramu kuti Troy Ounces.
Gold karat paIndaneti Calculator
Change goridhe mimwe pakati carats, zviratidzo ndarama kana chikamu chendarama zvishongo.
Rine makuru uye mhete duku Sizes chati munyika dzakasiyana.